मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो निकृष्ट बालश्रम मुक्त शहर बनाउने तयारी भइरहेको छ । अब हेटौंडाका कुनै पनि ठाउँमा, कार्यस्थलमा निकृष्ट बाल श्रम प्रयोग भएको देखिनेछैन । यही असार महिनाको २० गतेभित्र मकवानपुरको हेटौंडाले औपचारिक रुपमै नेपालको पहिलो बालश्रम मुक्त शहरको पहिचान पाउँदैछ । यसका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । मात्र अब घोषणा गर्न बाँकी रहेको यो अभियानमा लागिपरेकाहरुले दाबी गरेका छन् । हेटौंडा उपहानगरपालिका र प्लान इन्टरनेशनलको सहकार्यमा गैरसरकारी संस्था बालकल्याण समाज मकवानपुरले हेटौंडालाई बालश्रम मुक्त शहर बनाउने अभियान लामो समयदेखि हेटौंडामा सञ्चालन गरेको थियो । बाल कल्याण समाजले प्लानसंगको सहकार्यमा हेटौंडामा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धि तथ्याङ्क लिने कामसंगै अघि बढेको अभियान यतिबेला हेटौंडाको नयाँ परिचय स्थापित गराउँन सफल भएको छ । हेटौंडाका १९ वटै वडालाई निकृष्ठ बालश्रममुक्त वडा घोषणा भइसकेकाले अब औपचारिकता दिएर हेटौंडा उपमहानलाई बालश्रमुक्त शहर घोषणाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला यस अभियानमा सक्रिय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भीम तिमल्सिनासंग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
हेटौंडा निकृष्ट बालश्रम मुक्त घोषणाको औपचारिक कार्यक्रमको तयारी कसरी हुदैंछ ?
– हामीले हेटौंडाका सबै वडालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिसकेका छौं । बालबालिकालाई श्रममा लगाउँनु हुन्न भन्दै जागरणमूलक अभियानका साथ काम गर्न पाउँदा यस अभियानमा लागेका हामी सबै उत्साहित छौं । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट यो महत्वपूर्ण कार्यका लागि हामीलाई साथ एवम् हौसला प्राप्त भयो । सबै सरोकारवालाका बिचमा सहयोग र समन्वय छ, अब यही असारभित्रै हामी औपचारिक रुपमै हेटौंडा उपमहानगरलाई निकृष्ट बालश्रम मुक्त शहर घोषणा गर्दैछौं । यो घोषणासंगै ‘निकृष्ट बालश्रममुक्त नेपालकै पहिलो शहर–हेटौंडा’ भन्ने हाम्रो पहिचान बन्नेछ । यो हामी सबै मकवानपुरबासीको गौरव हो ।
यो अभियान कसरी सुभारम्भ भयो ? जानकारी गराइदिनुहोस् न ।
– सन २०२० सम्म राष्ट्रलाई बालश्रम मुक्त बनाउने नेपालको योजना छ । हामीले मकवानपुरको हेटौंडामा सन २००९ देखि बालश्रमको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौं । सन् २०१४ जुन १२ मा हेटौंडाको वडा नम्बर ११ लाई निकृष्ट बालश्रममुक्त वडा घोषणा गर्यौ। हेटौंडाका सबै वडाहरुमा हामी यही अभियान लिएर पुग्यौं । वडामा सक्रिय टोल विकास, नागरिक समाज सबैबाट साथ सहयोग मिल्यो । उहाँहरु आफ्नो वडामा अब बालश्रम प्रयोग गर्न गराउँन नहुने अभियान सफल पार्नुपर्छ भन्दै लाग्नुभयो । हामीलाई पनि सबैको साथ र सहयोग भएमा हेटौंडालाई निकृष्ट बालश्रममुक्त शहर बनाउँन सकिन्छ भन्ने महसुस हुन थाल्यो र अभियान अगाडी बढाउदै लगियो, नभन्दै हामी सफल भयौं । हेटौंडाको १९ वटै वडालाई स्थानीयहरुकै विशेष सक्रियता तथा भूमिकामा निकृष्ट बालश्रममुक्त वडा घोषणा गर्यौ । सबै लागिपरेका कारण हामीले यो एउटा महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएका हौं ।
अब हेटौंडामा निकृष्ट बालश्रम प्रयोग नहुने भयो भन्नेमा विश्वस्त चाहीं कसरी हुने ?
– कुनै पनि घोषणा आफैमा पूर्णता होईन । यो घोषणा भनेको अहिले यहाँ बालश्रम छैन र अब सधैं यसको लागि लागिरहन्छौं भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौं । हामी घोषडापछि पनि यस अभियानमा निरन्तर लागिपर्छौ ।
भनेपछि घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था बारे अब यहाँहरुले अनुगमन, अवलोकनको काम गर्नुहुन्छ ?
– हो, हामी सरोकारवाला बसेर योजना बनाउँछौं । हामी अब दुई प्रकारका कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने योजनामा छौं । पहिलो प्रचार प्रसार, अर्को हामी सबै सरोकारवालाको समूह बनाएर अनुगमन गर्छौ । हेटौंडालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गरिसकिएको अवस्थामा बालश्रम प्रयोग भएको पाइएमा कानूनी कारवाहीका लागि हामी लागिपछौं । कानून भन्दा माथि कोही पनि छैन, निकृष्ट बालश्रम सामाजिक अपराध हो, अपराध गर्नेलाई सजाय दिलाउने हामी अभियन्ताहरुको जिम्मेवारी हो । सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग आपसमा छलफल गरेरै हामी अघि बढ्छौं ।
यो अभियान यहाँसम्म आईपुग्नका लागि तपाईहरुले को-को संग कसरी समन्वय गर्नुभयो ?
- बालअधिकारका क्षेत्रमा मकवानपुरमा सक्रिय सरकारी एवम् गैरसरकारी सबै क्षेत्रसंग हामीले समन्वय तथा सहकार्य गरेका छौं । श्रम कार्यालय, प्रहरी, बाल कल्याण समाज, पत्रकार महासंघ, प्लान नेपाल, सिविन सबैको साथ सहयोग र हौसला हामीले प्राप्त गर्यौ। सबै निकायले आफ्नो तहबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुभयो । अभियान सफल बनाउँन हामीले नगरस्तरीय सञ्जाल पनि गठन ग¥यो, जसका कारण आज हामी सफलता पाउँदैछौं ।
अब बालश्रम प्रयोग भएको पाईएमा के गर्नुहुन्छ ?
– यदि हामीले गरेको अनुगमनका क्रममा कहि कतै बालश्रम प्रयोग भेटिएमा सबैभन्दा पहिला त त्यसरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउँनेलाई सम्झाइ–बुझाई गर्ने काम हुन्छ । बालश्रम प्रयोग भएको पाइएमा बालबालिकालाई संरक्षणमा राख्नेछौं । बालबालिकाका अभिभावक र श्रममा लगाउँनेलाई सम्झाउनेछौं । बालश्रम प्रयोग गरेमा हुने सजायका विषयमा जानकारी गराउँनेछौं । यति गर्दा पनि उहाँहरुले मान्नु भएन भने बालश्रम प्रयोगकर्तालाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धि निकायमा हामी पुग्नेछौं ।
अन्त्यमा घोषणाहरु कहिलेकाहि घोषणामै सिमित पनि हुने गरेको छन्, चुनौति के देख्नुहुन्छ ?
– चुनौती छ यो घोषणमा मात्र सिमीत हुदैन किनकी यो हामीले होइन, जनताले गरेको घोषणा हो । त्यसैले पनि यस घोषणाको निरन्तरता हुन्छ । त्यसैगरी घोषणापछि पनि हामी निरन्तर योजना बनाएर यो क्षेत्रमा लाग्छौं त्यसैले यो घोषणामै सिमीत हुदैन ।
प्रस्तुती : रामहरी गौतम/ मध्यस्थता